Oduu Archives - Page 2 of 146 - OMN
OMN:Caamsaa- 05/2018 Naannoo Hararii magaalaa Hararitti gidiraan bulchinsa garasiin ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamaa jirtu akkuma itti fuftetti jiraachuun maddeen addeesan. LYM dahoo...
Harargee lixaa magaalota Bookee guddoo fi Bookee xiqqotti hawaasni bu’uuraalee misoomaa dhabuun rakkachaa jirra jedhan.
OMN:Caamsaa-05/2018 Godina Harargee Lixaa Magaalota Aanaa Bookee xiqqoo fi guddotti, hawaasni bu’uraalee misoomaa dhabuun rakkachaa jirra jedhan. Daandiin konkolaataa magaalota kaneenitti dhabamuun...
OMN:Caamsaa – 05/2018 Mootummaan woyyaanee sabaaf sablamoota wal ollaa jiran kanneen nagayaan baroota dheeraadhaaf kabajaa fi jaalalan wajjiin jiraachaa turan jiddutti shira...
Dhalattoonni Somaalee magaalaa Dirre-dhawaa jiraatan guyyaa har’aa salaata Jum’aatiin booda bulchiinsa Abdii illee irratti mormii dhageessisaniiru.
OMN:Caamsaa – 04/2018 Guyyaa hardhaa Magaalaa Dirre-dhawatti dhalattoonni Somaalee Salaata Jum’aatiin booda mormii dhageessisaa turaniiru. Moggaasa maqaa afaan Somaaleetiin Dulmi-didi ykn Diddaa...
Harargee lixaa Aanaalee hedduu keessatti humnoonni komaandi Poostii hawaasa irratti hidhaa fi dararaa gaggeessaa jiran itti fufaniiru jechuun jiraattonni dubbatan.
OMN:Caamsaa- 04/2018 Humnoonni Komaand poostii hawaasa nagayaa hiraarsuu fi dargaggoota ukkaamsuu cimsanii itti fufanii jiran . Godina Harargee lixaa aanaalee Habroo, Daaroo...
Muummichi Ministeera Itiyoophiyaa Dr.Abiy Ahimed fi Pireezdaantiin Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa godina Baalee dawwachuuf jedhame.
OMN:Caamsaa- 04/2018 Erga angoo qabatanii naannolee fi magaalota gara garaa kan naannawaa jiran Muummeen Ministeera Itiyoophiyaa Dr Abiy Ahmad fi Pireezidaantiin naannoo...
Harargee lixaa Aanaa Cirotti,qonnaan bultoonni maqaa ijaarsa Pirojeektii Odaa Bultumiitiin lafa isaanii irraa buqqa’ani rakkoo jabduu keessa akka jiran dubbatan.
OMN:Caamsaa- 04/2018 Godina Harargee lixaa aanaa Ciroo Araddaa Najabaasitti sababa ijaarsa Project Odaa Bultumiin wal qabatee Qonnaan bultoonni lafa isaanii irraa kaafaman...
Harargee bahaa Aanaa Kombolchatti dabballoonni Opdo Komaandi poostii wajjiin ta’uun hawaasa dararaa jiru jedhame.
OMN:Caamsaa-03/2018 Godina Hararagee Aanaa kombolchaa Araddaa burqaa Diinitti bulchinsi Araddaa Obbo Abdurazzaaq Ahmad kaayyoo diinaa tarkaanfachiisuun jiraattota jeeqaa jiraachuun dhagahame. Namni kun...
Sirni Gadaa Oromoo Arsii Sikkoo-Mandoo Odaa Roobbatti sirna baallii wal harkaa fuudhuu gaggeessaa jiru.
OMN:Caamsaa- 03/2018 Sirni gadaa Oromoo waggoota dheeraadhaaf dhiibbaa irratti taasifamaa tureen addaan citeera. Abbootiin gadaa, hayyoonni seenaa fi hawaasni bal’aan tattaaffii guddaa...
Yuunivarsiitii Haramayaa fi Jimmatti Mormiin haarayoomuu heeyyama Midrook ilaalchisuun guyyaa har’aa gaggeeffameera.
OMN:Caamsaa – 3/2018 Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haromaayaa guyyaa har’aa sagalee mormii dhageeysisan. Akeekni hiriira mormii barattootaa kun miidhaa dhaabbanni warqee Meedrook ganna...
OMN:Caamsaa- 03/2018 Mormiin hawaasaa bifa haaraan kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti eegalame itti fufeera. Guyyaa har’aas Godina Booranaa Aanaa Miyoo Magaalaa Hiddii...
Magaalaa Dadaritti balfi walakkaa magaalatti yeroo dheeraaf kuufame ture jiraattota irratti rakkoo fayyaa dhaqqabsiisaa jiraachuun himame.
OMN:Caamsaa- 02/2018 Godina Harargee bahaa keessatti magaaloonni umrii dheeraa qaban bu’uraalee misoomatiin dagataman hedduun akka jiran beekkamaadha. Isaan keessaa Aanaa Dadaritti tan...
Ayyaanni hundeeffama OMN kan waggaa 4ffaa biyya Sawud Arabiyaa magaalaa Riyaaditti haala hoo’aa ta’een tibbana kabajameera.
OMN:Caamsaa – 02/2018 Ayyaanni hundeeffama OMN waggaa waggaan kabajamu bara kanas ganna afraffaan isaa biyyoota gara garaatti bifa dammaqina qabuun kabajamaa jira....
Haaromfamuu heeyyama MIDROC GOLD’n wal qabatee mormiin hawaasa naannichaatiin gaggeeffamaa jiru har’as guyyaa sadaffaaf cimee itti fufeera.
OMN:Caamsaa- 02/2018 Godina Gujii Aanaalee garaa garaatti mormiin Hawaasaa itti fufeera. Aanaa Gooroo Doolaa Magaalaa Haraqalloo, Aanaa Annaa Sorraa, Oddoo Shaakkisoo,...